Fursadaha Tabaruca ee Daryeelka Caafimaadka iyo Caafimaadka | Tonka Adeegaa
Fursadaha tabaruca maalmaha shaqada 9 subaxnimo - 3 galabnimo iyo inta lagu jiro xagaaga. Ka eeg bogga wixii macluumaad dheeraad ah iyo si aad u dalbato.
Isbitaalka Fairview Southdale
Waxay ku siinaysaa meelayn tabaruc ah meelo kala duwan oo ku saleysan danahaaga iyo awoodahaaga. Fursadaha Maalinta, Fiidka iyo Sabtida iyo Axadda waxaa heli kara tabaruceyaasha da'doodu tahay 14 ama ka weyn.
Fur hubka Minnesota
Open Arms Minnesota waxay siisaa cunnooyin guryahooda loogu talagalay dadka cudurka ku dhex nool bulshada dhexdeeda. Qurxiyaan bacaha alaabta la geeyo, samee waddo dalag ah, keen cunto, tababar si aad jikada uga shaqeyso ama tabaruc ugu sameyso beertooda dabiiciga ah.
Isbitaalka Park Nicollet Methodist
Park Nicollet, waxaan aaminsanahay in carruurta la siiyo fursad ay si togan ugu saameeyaan bulshadooda iyadoo loo marayo fursado iskaa wax u qabso ah. In kabadan 70 dhalinyaro ah, oo da'doodu udhaxeyso 15 ilaa 18, ayaa si joogta ah ugu tabaruca waqtigooda waxayna wax ka badalaan nolosha bukaankeena iyo bulshada.
Xarunta Caafimaadka Ridgeview
Waqtiga iyo dadaalka ay ku tabaruceen tabaruceyaashu waa mid aad u qiimo badan oo ay qadarinayaan shaqaalaha Ridgeview, bukaanka iyo martida. Mutadawiciintayada waaweyn iyo ardayda waxay u adeegaan jagooyin kala duwan. Waxaan la shaqeeynaa shaqsi kasta si aan u helno meelayn ku habboon oo ku habboon danahiisa, xirfadaheeda iyo helitaankiisa.
Ronald McDonald House Charities, kore Midwest
Waxaa jira saddex goobood oo ku yaal Magaalooyinka Mataanaha ah, mid walbana wuxuu leeyahay fursado iskaa wax u qabso iyo isbeddello gaar ah.